H. Jon Benjamin Uthetha ngeJazz kunye neBob's Burgers Inkqubela phambili yeMovie - Iimuvi
Eyona Iimuvi H. Jon Benjamin Usihlaziya kwi-Improv Jazz yakhe kunye neMuvi kaBob's Burgers
H. Jon Benjamin Usihlaziya kwi-Improv Jazz yakhe kunye neMuvi kaBob's Burgers
Siqale ukurekhoda iaudiyo kangangoko sinakho ukulungiselela Bob's Burgers Umboniso bhanyabhanya, H. Jon Benjamin, ilizwi likaBob Belcher, uyatyhila.Umzekeliso: UJulia Cherrruault / uMjongi; Ifoto: Paul Butterfield / Getty Izithombe
kwenzeke ntoni gal embi
Phambi kwelizwi lakhe sebenza kwiikhathuni zabantu abadala ezinje nge Bob's Burgers kwaye Utoli , H. UJon Benjamin wayenendawo yokuma apho wayexoxa ngomculo njengendawo yokuphuma, emva koko wayedlala ipiyano.
Ihlaya lalinjalo-kwaye lisenjalo-ukuba uBenjamin akakwazi ukudlala ipiyano. Kukonke.
Unyana wam, uJudah, uhlala ebonisa ukuba loo nto ihambe kakubi kangakanani, utshilo uBenjamin. Ndisuke ndayihlekisa kwisiphelo sayo esona sinokwenzeka, kwimeko yokwenza i-albhamu yonke.
Ngoku, kwiminyaka emihlanu emva kokuqala kwakhe ukudlala ijezi Ewe, bendifanele ukuba… ndifunde ukudlala ipiyano , IJazz Daredevil ibuyile ne Ingqokelela yengoma yesandi kweli hlobo. I-albhamu yesibini inika uBenjamin ukuphinda enze imixholo edumileyo yamabhanyabhanya ngoncedo lweMogog synthesizer, umvelisi uZachary Seman kwaye, kwezinye iindlela, iBudapest Scoring Orchestra. I-albhamu epheleleyo iquka iziqwenga ezivela IBeverly Hills Cop , Umpu ophezulu kwaye Ibali lothando .
Kudliwanondlebe kunye Umjongi , UBenjamin uxoxe ngealbhamu entsha, uthando lwakhe lwejazz kunye noluzayo Bob's Burgers imuvi.
Umjongi: Ingqokelela yengoma yesandi izandi ezifana ne-albhamu Gene ukusuka Bob's Burgers iyakwenza.
UJon Benjamin: I-Gene inokuba ngcono kunam. Udlala eyantlandlolo. Ndenza nje iimboyi.
Akunjalo. Ngokwethiyori. Ndizamile ukuqala. Umbono wokuqala wokulandelwa kukuba ndiza kufunda ukudlala kunye nokukhupha i-albhamu, enokuthi ibe yinto engaphaya. Kuqinisekisile, emva kwezifundo ezibini, kunzima kakhulu. Ndancama ngokukhawuleza.
Ngubani okunike izifundo?
Ndasondela kumfana endimenzileyo Ingqokelela yengoma yesandi no — Zach Seman. Ungumdlali wepiyano, umvelisi kunye nemvumi. Ndixubushe naye ngombono wokwenza icwecwe ngelixa ndizama ukufunda indlela yokudlala. Oko kwaqala uhambo lwethu lokwenza Ingqokelela yengoma yesandi . Wayengowokuqala kunye nomqeqeshi wepiyano kuphela endanxibelelana naye.
[IBudapest Scoring Orchestra] yayingazi ukuba andinakudlala, kwaye babengonwabanga ngayo.
Kwi-albhamu yokugqibela, ubudlala neqela lomculo wejazz. Apha, udlala i-Moog synthesizer. Ngaba uSeman ukucebisile ukuba udlale i-synth yealbhamu entsha?
Hayi. Kusenokwenzeka ukuba bekukho umbono wokusebenzisa i-synthesizer njengendlela yokufihla indlela endidlala kakubi ngayo. Kwezinye iindawo, kuyasebenza. Ndifumanise ukuba ndingangcono kakhulu kwis synth kune-acoustic. Ii-solos zam ziqinile ngoku.
It yenza kuvakala ngathi uyazama .
Mna ndim . Ndiyathemba ukuba iza kuvela. Xa sirekhoda, ezinye bezingaqhubeki zithatha, kwaye ndizamile ngokwenene ukuzifunda. Kule meko, kuye kwafuneka ndikhokelwe kancinci phi Ndiyadlala, kodwa yonke enye into intuition entle. Ivela ngokusuka entliziyweni.
Zingaphi izinto ozithathileyo ngengoma nganye yale albhamu intsha?
Kuxhomekeke kwingoma. Ibali lothando lithathe ixesha elide. Oko kunokuba kuthathe ngaphezulu konyaka. Ezinye izinto, ezinje ngomxholo osuka eHalloween, yayiyinto enye ethathiweyo. I-Duelin 'Moogs yayikunye nokuthatha. Sabuya umva amaxesha ambalwa ukulungisa izinto. Kunzima ukutsho kudliwanondlebe ukuba ndibuyile ndalungisa umsebenzi wam kweli cwecwe elithile, ndijonga ubunyani besandi, amava onyana, kodwa besizama nokuba ngabangaphucukanga kangangoko.
Ngaba zikhona iingoma obufuna ukuzenza kodwa ungakwazi?
Sibuyele emva nangaphaya kwinto enokubonwa kwelona nani likhulu labantu, kunye neengoma eziqaqambisa kunye nenqaku le-synth. Ndiyacinga Rockit nguHerbie Hancock yenye le besifuna ukuyifumana kwaye siyirekhode.
Ive njani i-Orchestra yeBudapest yokufumana amanqaku ngokusebenzisana nawe?
Basebenzela ukuqesha, kodwa babengazi ukuba kwenzeka ntoni. Xa sasikhwela inqwelo-moya siye eHungary, yonke into yayisemoyeni. Kwakungekho ninzi isicwangciso. Singene estudio sibanda. Iyamangalisa indlela abasebenza ngayo. Bafumana amanqaku ngetoni yeeprojekthi kunye neengoma ezivakalayo zemiboniso bhanyabhanya, kumazwe aphesheya. Bafana nomatshini oneoli eninzi, kwaye baya kwiseshoni ukuya kwiseshoni. Sineyure kunye nabo. Babengazi ukuba andinakudlala, kwaye babengonwabanga ngayo.
Ngokuqinisekileyo kukho inkqubela phambili [kumdlalo bhanyabhanya kaBob's Burgers]. Siqale ukurekhoda iaudiyo kangangoko sinako. Wonke umntu usebenza ekhaya, kodwa ndiyazi ukuba benze i-animatics uninzi lwayo.
Yintoni le uyithandayo ngejazz?
Ndikhule ndimamela ijazz ngotata. Yiloo nto mhlawumbi eqale imbewu yomdla wam ekuzameni ukuyenza. Uninzi lwabantu luye lwabonisa ukuba isiqhulo sasiyinto enqabileyo kuba iyacaphukisa ngokwenene iimvumi ze-jazz ezisebenza nzima kwaye zenza ezikwenzayo. Ukukhusela ithisisi yam, ndizama ngenene ukudlala, kwaye i-jazz mhlawumbi kuphela komculo ovumela ukuba ndenze oko kuba kuphuculwe. Kufana nokuba ndingayichitha i-anyanisi yomoya wam wokuyila. Ndikubonisa ubuntu bam, njengayo nayiphi na imvumi yomculo wejezi, ngokudlala.
Ngaba zikhona iimvumi ezikunike ingxelo ngomculo wakho?
Andikaze ndive mntu. UHarold Faltermeyer (umqambi ongasemva komxholo we-Axel F ovela IBeverly Hills Cop ) khange andibize. Ndilindele ukufumana umnxeba ovunyiweyo we-Faltermeyer wokuqinisekisa.
Ndicinga ukuba iBelchers iyayithanda le albhamu.
Ewe ndicinga ukuba le iya kuba yi-albhamu yakhe uGene angayifumana kwigumbi lakhe, akunjalo? Andiqinisekanga ukuba i-Belchers iyakuxabisa ihlaya, kodwa mhlawumbi.
Ngaba unazo naziphi na iindaba kwi Bob's Burgers imuvi?
Ngokuqinisekileyo kukho inkqubela. Siqale ukurekhoda iaudiyo kangangoko sinako. Wonke umntu usebenza ekhaya, kodwa ndiyazi ukuba benze i-animatics uninzi lwayo. Ukuza kuthi ga ngoku, ndingene kwiseshoni ezine okanye ezintlanu, kwaye ndenze ipasa yokuqala kumdlalo bhanyabhanya. Ndicinga ukuba isendleleni eya kukhutshwa entwasahlobo, kodwa andazi ukuba izakuhlala injalo na. Basebenza ngoku ngamandla ngoku, kangangoko banako.
Ngaba ikhona into ongathanda ukongeza ngayo Ingqokelela yengoma yesandi ? Mhlawumbi nantoni na ucebisa ukuba abaphulaphuli bayenze ngelixa bethatha eli cwecwe?
Ngokuqinisekileyo kukuqhuba okuhle komculo. Beka umphezulu phantsi. Nyusa ivolumu kwaye ubethe idolophu. Hayi, musa ukubetha idolophu ngoku, eneneni. Hlala nje ekhaya.
Olu dliwanondlebe luye lwahlelwa ngobufutshane nangokucacileyo.
I-Reddit iyayithintela i-Creepshots kunye neCreepsquad, ii-Subreddits ezenza ukuba 'iMfazwe' yayo neGawker
USophie Turner kunye noJoe Jonas Bahlala kwiYacht yabo eNtsha ngokuPhila kunxweme lwaseAmalfi
Owayesakuba ngumphathi we-Airbnb uzisa ukuhanjiswa kweerobhothi kwiikhampasi zekholeji
Ngaba induli yagijima ngo-2012
9/11 ngaphakathi kwiinqaba
Iimfazwe zeenkwenkwezi zijikeleza iifilimu
Amaxesha athengwa kakhulu ngo-2016 york
ngaphezulu kwesi-5 sangaphambi kokuzilolonga